I-China Tube iFibre yeLaser yokusika iMatshini yoMvelisi kunye noMthengisi | Guo Hong
Umatshini wokusika i-Tube Fibre Laser
Tube ifayibha laser ukusika umatshini yenzelwe ngokukodwa imibhobho, kulula ukusebenza. Ngomgangatho wokusika olungileyo kunye nokusika ukusebenza kakuhle, ityhubhu yefayibha laser cutter isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zemidlalo, iintlobo ezahlukeneyo zombhobho, imibhobho yamanzi, imibhobho yeoyile kunye namanye amashishini, kwaye iguqulelwe kwizinto ezahlukeneyo zemibhobho ezimile njengoku: Umbhobho wesikwere, umbhobho oxande, umbhoxo okweqanda, njl.
Isantya esiphakamileyo ityhubhu ifayibha laser ukusika umatshini, kulula ukusebenza.
Ukusebenza okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu.
Ukusika iNtloko ngokukodwa kwi-Tube Cutting
Ingcali yokusika eyi-smart yenza iintlobo ezahlukeneyo zokusika ityhubhu ngokulula;
Ngombulelo kuyilo oluchongiweyo, kulula ukukhusela ukungqubana xa usika iityhubhu ezibukhali;
Ukudibana okutsha kunye neelensi zokukhusela, ukukhuselwa okungcono kwezinto eziphambili.
Ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo isiqu se-pneumatic chuck
I-170mm i-pneumatic chuck ngokuzenzekelayo, ukuqhuba ngokuchanekileyo kwezixhobo;
Umsebenzi onamandla wokuzenzela ngokuzenzekelayo, amaxesha ama-3 isantya sombane wombane, efanelekileyo kwaye efanelekileyo;
Ukunyanzelwa kombane ngamandla amakhulu
Inkqubo yokusika umbhobho
Ixhasa ukusika okuphezulu kunye nokusebenza kakuhle kwemibhobho yesikwere, iityhubhu ezijikelezileyo, ukumiliselwa komdyarho weembaleki, i-elliptical kunye nezinye iityhubhu ezoluliweyo, kunye nentsimbi ye-engile kunye nentsimbi yejelo.
· Imbuyekezo yesiseko sokuphambuka
Ukuchaneka okuphezulu kokugqobhoza
· Inkxaso yekona yokwenza iseti nganye
Inkxaso yetekhnoloji ephambili enje ngendawo yokupholisa, ukusika iringi yekona ebukhali, ikona yokukhupha, njl.
Isakhelo sebhedi esinye
Umbhede uhanjiswe kubushushu obuphezulu be-800 C ukuphelisa uxinzelelo lwangaphakathi. Umatshini wonke uhlanganiswe kakhulu, kunye nokusebenza kakuhle kwenkqubo kunye nobomi obude
Uyilo oluyingqayizivele lolwakhiwo lwamashishini luyinika uzinzo oluphezulu kunye nokuchasana okuphezulu kokungcangcazela kunye nomgangatho wokunciphisa.
Ngaphambili nangasemva kwe-Pneumatic Chuck yomoya oZenzekelayo
Tube laser ukusika umatshini unokuqonda ubungakanani obunokubakho kunye nokuma kwento yokusebenza kwesakhiwo setyhubhu enje ngathi ukusika
Umzekelo womatshini I-GHJG-F6020T (500W-1500W)
Ukucanda ubukhulu ityhubhu ngeenxa zonke 20-200mm
Ukucanda ubukhulu ityhubhu isikwere 20 * 20mm-150 * 150mm
Ubukhulu. isantya sokuhamba 100m / min
Isantya esikhawulezayo 1G
Amandla asebenzayo I-1000W-60000W
1. I-Tube ephezulu yeLaser Tube, kulula ukuyisika
2. Umgaqo oLungileyo weNdlela, isantya esiphezulu kwaye ichanekile, umthamo womthwalo onamandla kunye nokuqina
3. Inkqubo yoLawulo loBuchule, ukusika ngesantya esiphezulu.
4.Ukujikeleza kokupholisa amanzi, kuqinisekisa ubushushu bamanzi rhoqo.
5.Professional lobusi kunye Strip itheyibhile yomsebenzi, ezihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo laser mngcelele
6.Le software iyahambelana neenkqubo ezininzi zoyilo.
Egqithileyo Plate kunye Tube Laser Cutting Matshini
Okulandelayo: Oluzenzekelayo Tube Tube Laser Cutting Matshini
eyona cnc laser mgawuli
eyona laser cnc umatshini
i-laser cutter ezilungileyo
Umatshini wokusika umbhobho we-laser
iindawo mgawuli laser
umsiki wombhobho we-laser
Umbhobho wokusika we-laser
ngqo laser mgawuli
Oluzenzekelayo Tube Tube Laser Cutting Matshini
Umsebenzi osindayo weLaser Tube Umatshini wokusika
I-Tube-Tube Tube I-Laser Ukusika Umatshini